Hsuchiko💙💙 - Layatemon - Wattpad
#romance #biography #random
255K 37.5K 31
Romance between Boys ***Own Creation***
True Story Between Us
29.3K 2.6K 13
Facts + Creations
My Dumb Author (Unicode & Zawgyi)
26.4K 3.7K 11
Normal Love Story Based on true story
16.1K 955 6
Sharing what I know about writing.
42.6K 5.6K 23
Normal OC သင်တို့ကိုယ်စောင့်နတ်ရှိတယ်ဆိုတာယုံလား သင့်ကိုယ်စောင့်နတ်ကရော သင့်ကို ချစ်တယ် ထင် လား။ အကယ်၍ အကယ်၍ပေါ့ သင်နေ့စဉ် ကုသိုလ် ပြုပြီးတိုင်း မေတ္တာပို့ အမျှဝေပေးလေ့ရှိတဲ့ သင့် ကိုယ်စောင့်နတ်က သင့်ကိုလည်း မေတ္တာသက်ဝင် မယ်ဆိုပါက...
PRO ||Season One||
725K 78.7K 38
BL Romance,Drama and other age limited feelings အချစ်ဆိုတာ PROဆန်စရာလည်းမလိုပါဘူး နောက်ပြီး ကိုယ့်အချစ်က ကောင်းလှချည်ရဲ့ဆိုပြီး PROmotion ဆင်းပြီးချခင်းပြစရာလည်း မလိုပါဘူး။ ဒါဆို တကယ်တမ်း ဘာလိုအပ်တာလဲ?
PRO ||Season 2|| (unicode & zawgyi)
664K 84.8K 40
Boy Love Story Romance , Drama & other age limited feelings
189K 20.7K 18
2M 134K 48
2.9M 220K 74
NO (Zawgyi and Unicode)
1.6M 145K 52
Trust me,you are my one in millions Romance,Funny, Sweet & Pure BL Cover design by Su Myat Yadanar
20K 1.5K 4
108K 9K 30
Original Story name is Raining in 95 Author is Pyoo Lat Han.This book is published in 2012 ,April.I read this book again and agin.Whenever I read this,I feel deeply in my heart.Now I decided to recover into Chanbaek version.This is my first experience in changing version from normal story to bromance.Thank for your at...
43K 4.2K 17
I don't like Sasaeng.But she comes to me as Sasaeng.She is my??? #Suho
65.9K 5.5K 30
There isagirl who wants to be an international stylist.But her father doesn't allow her.So she run away from her father and follow her dreams.And then she finds her real dream & love.
30.5K 3K 4
Mini Story Romance ,Fancy & Uni Life Present For Jess
8.1K 528 5
ကိုယ်​ချစ်​​သောလူသားနှစ်​​ယောက်​ တစ်​​ယောက်​​သောသူကိုချစ်​တယ်​ ကိုယ်​ချစ်​တဲ့တစ်​​ယောက်​​သောသူကိုကိုယ့်​လိုချစ်​​ပေးလို့ အမှန်​​တော့ကိုယ့်​ထက်​​တောင်​ပိုလို့ချစ်​​ပေးတဲ့သူ့ကို ကိုယ်​ချစ်​မိလာတယ်​။ကိုယ်​ချစ်​တဲ့ သူ​လောက်​မဟုတ်​​တောင်​ ကိုယ်​ချစ်​တဲ့လူကိုသူ ချစ်​သလို ကိုယ်​လည်းသူ့ကိုချစ်​တယ်​ အတိတ်လမ်းသို့ ပြန်မျှော်ကြ...
78.5K 5.3K 41
22.3K 1.8K 3
CHANBAEK Mini Fanfic Sweet,Romance & Pure Love
50.4K 3.5K 30
Luhan:: Asia တိုက်၏သြဇာကြီးဆုံးXiao လုပ်ငန်းစုကြီးရဲ့တစ်ဦးတည်းသော အမွေဆက်ခံသူ။အနုပညာကိုဝါသနာပါသော်လည်း အဘိုးနဲ့အဖေတို့ရဲ့ အာဏာစက်ကိုမ ကျော်လွှားနိုင် ၍Xiaoဆေးကျောင်းတွင် Baby caring major ကိုတက်ရောက်နေရသူ။but ငယ်စဉ်ကတည်းက မခွဲမခွါနေခဲ့သောသူငယ်ချင်းလေးယောက်နဲ့ XOXOအဖွဲ့ကိုဖွဲ့လျက်Asiaတစ်ဝှမ်း online boy bandအေ...
54.4K 3.2K 33
Another name is ""Awaken kiss"" Howalove can heal someone's life? You can find pure loves in this fic. Teenagers,Romance,First love & other feelings.
I just want to know you all that I love you all>>>>>Hyung's IG Update